ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သည့်သူများ မြင့်မြတ်သည့်ဘုံသို့ ရောက်နိုင်၊ မရောက်နိုင်… | " မနာပဒါယီ "
ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သည့်သူများ မြင့်မြတ်သည့်ဘုံသို့ ရောက်နိုင်၊ မရောက်နိုင်…
။ အချိန် 12/02/2008 12:43:00 PM
Q. အရှင်ဘုရား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည့် အခြားသော ကိုးကွယ်သည့် လူးများအနေဖြင့် နိဗ္ဗာန် မဟုတ်တောင် မြင့်မြတ်သောဘုံသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသလား အရှင်ဘုရား..
A. ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးခြင်း၊ မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတဲ့ အကျိုးပေးခြင်း ဆိုတဲ့ ကမ္မနိယာမ- ကံရဲ့သဘောမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်လို့ ကောင်းတဲ့ ဘုံရောက်တယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်လို့ မကောင်းတဲ့ ဘုံရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ ခွဲခြားပြီး အကျိုးပေးမှု မရှိပါဘူး။ ဘယ်သူမဆို ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတဲ့တန်ပြန်သက်ရောက်မှု မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုကို ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်အမှုအရာ၊ နှုတ်အမူအရာ၊ စိတ်အမူအရာဆိုတဲ့ ကံသုံးပါးကို ကောင်းအောင်စောင့်ထိန်းမယ်ဆိုရင် ဘာသာဝင်မခွဲခြားဘဲ ထပ်တူထပ်မျှ အကျိုးခံစားရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ကျင့်တရားလုံခြုံ နေမယ်၊ ကံသုံးပါးကို ကောင်းအောင်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ဒကာလေးပြောသလို မြင့်မြတ်တဲ့ ဘုံဘ၀ကို ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ်လုပ်တဲ့ ကံကိုယ်ပြန်ခံရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သည့်သူများ မြင့်မြတ်သည့်ဘုံသို့ ရောက်...
သူ့အလိုလိုက်၍ ကိုယ့်အလိုပြည့်အောင် လုပ်နည်း(၁၃)မျိုး